Zvaunofanira kuita mushure mekuisa Linux Mint 16 Petra | Kubva kuLinux
Zvaunofanira kuita mushure mekuisa Linux Mint 16 Petra
Nguva imwe neimwe yavari zvimwe ari vanoshandisa zvekuparadzirwa uku waiziva break off de Ubuntu uye tora imwe nzira yakati siyanei. Heino post-yekumisikidza gwara revashandisi vachangotanga kubuda
Zvimwe zvekufunga nezve kufunga usati watanga gwara.
Mushure mekujekesa aya mapoinzi, isu tinoramba tichinyora zvimwe zvinhu zvinoita kuti hupenyu huve nyore mushure mekuisa iyo nyowani vhezheni yeLinux Mint.
2 2. Isa madhiraivha eimba (vhidhiyo kadhi, waya, nezvimwewo
7 7. Isa odhiyo plugins uye yakaenzana
8 8. Isa Dropbox
10 10. Verenga zvinyorwa zviri pamutemo
2. Isa madhiraivha eimba (vhidhiyo kadhi, waya, nezvimwewo
MuMenu Zvekufarira> Zvimwe Zvidhiraivha tinogona kugadzirisa nekuchinja (kana tichida) mutyairi ane kodzero wekadhi yemifananidzo kana chimwe chishandiso chiri kukonzera matambudziko.
7. Isa odhiyo plugins uye yakaenzana
8. Isa Dropbox
Mune iyo "gore" zera, iwe unogona kunge uine Dropbox kana Ubuntu Rimwe account. Unogona kuisa Ubuntu One uye Dropbox kubva kuProgramm Manager. Neimwe nzira, iwe unogona kuisa Dropbox uchishandisa unotevera kuraira: sudo apt-tora kuisa kudonhedzera.
10. Verenga zvinyorwa zviri pamutemo
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Yakurudzirwa » Zvaunofanira kuita mushure mekuisa Linux Mint 16 Petra
Mhoro. Iwe unorevei kana iwe uchiti "mazhinji mapakeji nemapakeji anowirirana kwazvo pakati pezvikamu zviviri izvi" Izvo hazvisi zvese zvinogoverwa zvinoenderana neese GNU / Linux mapakeji? Ini ndinobvunza izvi nekuti ini ndinofunga chirevo ichi chinogona kuvhiringidza vashandisi veavice.
Zvisinei nezvazvo, ini ndinofunga icho chinyorwa chakanakira avo vari kupinda munyika yeMint.
Ini ndinofunga zvinoreva kuti, kunyangwe Mint yakavakirwa paUbuntu uye inoshandisa ayo ekuchengetera mazhinji ezve software, panogona kunge paine pasuru iyo inoiswa nekusarudzika muUbuntu uye kwete muMint uye ndiko kutsamira kwepakeji yatinoda kuisa. Iwe unoziva, kutsamira kunotenderera.
Nekudaro hapana chinhu chisingakwanise kugadziriswa uye kune akawanda software hapazove nedambudziko.
Makorokoto pane iyo posvo! Inonyanya kubatsira uye, kunyangwe Mint mumaonero angu ichiuya yakagadzirira zvirinani kupfuura Ubuntu, hazvimborwadza kuziva iro ruzivo!
Ndizvozvo vanhu. Tesla akarova kiyi. 🙂
Yakanaka posvo, asi ndeipi nzvimbo yedesktop yaungakurudzira mune iyi vhezheni ye linux mint?
Sinamoni kana iwe uine yakanaka GPU uye MATE mune yakapesana kesi.
Mhinduro dzakanakisa kuitwa kubva kumaneja (iyo nhovo icon), kubvira Mint, kuitira kuchengetedza kugadzikana kwesystem, hierarchize iyo yekuvandudza uye inongokutendera iwe kuisa kusvika padanho rechitatu nekukasira. Kana iwe ukagadzirisa neconsole, mamwe makiyi system mafaera anogona kuchinjwa.
Inonakidza ... ini ndakanga ndisina ruzivo irworwo! 🙂
Zvinotaridza kuti Petra iri kutendeuka kuita sarudzo yakanaka, ndinofunga ndichazvikurudzira kuti ndiyedze
Zvakanaka, ini ndaive Ubuntu 12.04 mushandisi, uye ini ndakaisa Mint Petra KDE, ndakaiyedza mazuva akati wandei uye handina kuzeza kuumba laptop uye kusiya iyo chete Mint, inoshanda kwazvo, yakagadzikana uye iine interface yakanyanya.
Ndakachinjira kuCinnamon uye ndakaifarira ...
yakanakisa dzidziso yakandibatsira zvakanyanya
Luis Marquez akadaro
Kwazisai nekutenda nemupiro, ini ndinongoda kuona kuti yakadii rutsigiro rwasara rweiyi yakanakisa vhezheni uye kana iyo lts ichibuda, kupi kuti uone zvimwe zvakawanda nezvayo.
Ndatenda uye ini ndakamirira mhinduro yako yemutsa.
Pindura Luis Marquez
LM 16 inotsigirwa kusvika Chikunguru 2014.
Mangwanani akanaka kune vese.
Ini ndaifarira ruzivo irworwo.
Ndine dambudziko randinotarisira kuti munogona kundibatsira.
Ndine mavhiki akati wandei ndichiedza kuisa linux mint 16, asi panguva yekupedza kumisikidza ini ndinowana kukanganisa nengano inoti chimwe chakadai "iyo yekumisikidza yarova" uye pandinotangazve izvi ndadzima grub rinonditadzisa kubva tanga ne linux kana win2 yandinayo mune chimwe chikamu.
Zvinoita kuti ndive neshungu nekuti pese pandinoedza uye zvikatadza, ndinofanira kuisa Ubuntu 13 kuti nditorezve bhutsu yangu mbiri.
Ndakaedza kuisa mint ne usb ndichishandisa Yumi nekupisa iyo iso kune dvd uye mhedzisiro yacho yaive yakafanana. nezuro ndakaburitsa chirongwa cheiliy musiki chimwe chakadai uye neichi ndakaziva kuti ziso rakanga rakanganisa mafaira. kunyangwe paunenge uchizvidhonza kubva pawebhusaiti yepamutemo.
Ndinovimba uye unogona kundibatsira, ndinonyatsoda kuisa linux mint pane yangu hp g42 laptop.
Ola Hola todos!
Uku kutaura ndekwe Diego García, uyo wandinoona haasati agamuchira mhinduro.
Kana, sekutaura kwako, iwe wakashatisa mafaera, kunyangwe uchitora ziso kubva pawebhusaiti yepamutemo, ona kana uchikwanisa kuiwana kubva kune imwe komputa kuti uitore uye upise ku disk. Zvichida nenzira iyi unodzivirira zvikanganiso, zvinogona kuitika kana uchinyora pakombuta yako. Kana kuti mumwe munhu waunoziva akusiire kopi. Kana ikaramba ichiitika kwauri, zvinoreva kuti chimwe chinhu hachiwirirane muhuradhi (zvishoma zvinoshamisa).
Uye ikozvino chirevo chakazara: Ini ndinoona kuti zvese zviri zviviri ubuntu uye mint zvine dambudziko remvumo yemushandisi, nemadhiraivha ari "asiri ewavo mushandisi". Rega nditsanangure. Administrator (iyo yandaisa system yacho), shamwari yangu haigone kuwana chikamu "D:" (ntfs) nekuti anokumbira password yemutungamiri (iyo yandisingade kumupa kuitira kuti asakanganisa chero chinhu).
Ndanga ndakatenderera chiuru uye handisi kuwana nzira yekushandura mvumo yekuparadzanisa "D:" kuitira kuti, sezvo isingakwire otomatiki, unogona kuisimudza kana uchida kuivhura.
Dai mhinduro yacho yainge iri yekuchengetedza zvinyorwa zvako mumafaira ako, ini ndaisazvida: kubva pawindows $$$ ndakadzidza kuti iyo data inofanira kunge iri kure nezvivakwa.
Pakutanga, mushandisi wega wega akatenderwa mvumo uye aigona kuwanikwa zviri nyore. Ikozvino pane zvingangoitika zviviri chete: "standard" uye "administrator" ... Kana iko zvino mushandisi akajairwa anoda maneja password ...
Salvador, iwe unofanirwa kugadzira kapfupi kuD: mukati memusangano musangano uye isa password yako. ipapo iwe unopa mvumo yekuuraya kumushandisi weshamwari yako. Kana zvakadaro hazvisi kukushandira
iwe unogona kugadzira nzira pfupi kubva kuaccount yako uye upe mvumo yekuuraya kumushandisi wako.
Ehe, zvakandishandira pasina matambudziko mune ese mavhezheni eUbuntu.
Mhoroi, ini ndiri mutsva ku linux mint, ini ndangoisa uye ichi posvo chakandibatsira zvakanyanya, ndiri kuongorora peji uye chokwadi ndechekuti ndaichifarira zvakanyanya.
Izvo zvakanaka! Ndiri kufara kuti zvinobatsira.
Gaston Barriga akadaro
Ndatenda zvikuru nekuda kweichi chinonyanya kubatsira posvo. Ndiri newbie kuLinux. Ini ndichangobva kuisa Linux Mint 16 pane yangu yekare Lenovo 3000 N200 0769 laptop, zvese zvinoita kunge zviri kufamba zvakanaka kunze kweiyo WiFi; Ini handikwanise kuwana waya isina kubatana kuti ishande. Pandinovhura mutyairi maneja ndinoona hwindo risina chinhu, risina chero runyorwa rwevatyairi kana zvishandiso, chete neshoko rinoti "madhiri epamutemo haasi kushandiswa". Iyo Revert uye Nyorera Shanduko mabhatani haashande. Ndingaite sei kuti ishandise isina waya controller? Ini ndinotenda chaizvo chero rubatsiro.
Pindura Gastòn Barriga
Kubva pane izvo zvaunotsanangura, pamwe unofanirwa kuzviita "neruoko" ... semuWindows, kana zvimwewo.
Nezve izvo, iwe unofanirwa kuisa ndiswrapper uye uwane kadhi windows windows mutyairi.
Saka kuti zvimwe kana zvishoma iwe uve neruzivo rwechinhu icho chiri nezve, ini ndinokusiira iwe chinongedzo (kunyangwe mune yako chaiyo mamiriro angave akasiyana):
mupiro wakanaka kwazvo kune avo vedu vakatanga kutama uye kutyora ngetani kubva kune yakavanzika kuenda kune yemahara mupiro mukuru kwazvo ndatenda
Pindura kuna luterano_Elsalvador_503
Abel lopez akadaro
Ndiri mutsva, ndakaisa Linux Mint isina internet, hapana kwandinogara, chii chandinofanira kuita izvozvi? Ndine imba ine hushamwari iyo inondibvumidza kuti ndibatanidze, inozvivandudza yega kana kuti ndinofanira kuzviita ndega Bata neni, ini ndiri ... 82-gore-rekare dummy ... ndinoshuvira kudzidza.
Pindura kuna Abel Lopez
Paunenge uchiisa mapakeji mu linux mint 17.1 zvinondiudza kuti kubatana nechengetedzo kwakundikana, ndingaigadzirisa sei?
Mhoroi, ini ndiri fan, uye ndinoda kuziva kuti ndeapi masisitimu anoshanda anogona kutsigira sinamoni, anoishandisa, zvinhu zvinoigadzira uye neruzivo rwakazara. Ndokumbirawo, zviri kukurumidza
Pindura kune FanY
Jaime Antonio Avila akadaro
Ini ndiri mutsva kumasystem anoshanda uye zvese zvine hukama nePC.
Iko kufarira kunouya nekuti ndiri kudzidza imwe yenyaya uye ini
mendaron, ona nezve Linux Mint.
Zvinoratidzika kunge zvakanaka kwazvo kwandiri, asi sezvo ndiri mutsva, ndinovabvunza.
Yangu pc haigone kunzwa ma cd's, ndinoda kuziva kana ndichifanira kuchinja muverengi
cd, kana iri iyo odhiyo sisitimu uye kana ndichigona kuzvigadzirisa nemadriver.
Ndatenda kwazvo, kusvikira nguva inotevera uye ndinovimba unondipa mhinduro.
Pindura Jaime Antonio Avila
senge acer kuitira kuti linux mint 17 rebeca isagare ichindibvunza makiyi
Mazano Makiyi api?
XMPP: kutaurirana pachena uye kwepasirese
jDirToText: Mafaira ako kuText